सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
दुई पटक हार्दा निराश भइनँ
काठमाडौँ — कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य चयन हुँदा दैलेखका हिमबहादुर शाहीले ऐतिहासिक पहिलो बैठकको सञ्चालनको अवसर प्राप्त हुने सोचेकासम्म थिएनन् । तर, ६८ वर्षीय शाहीले प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा त्यो मौका पाए ।
दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–४ बाट ४२ वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय शाही कांग्रेस जिल्ला सभापति, जिविस सभापति हुँदै प्रदेशसभा सदस्य भएका छन् । माघ २९ गते प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख चुनिएसँगै उनले पाएको महफ्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा हुनेछ । सभामुखको भूमिकामा पहिलो प्रदेशसभा सञ्चालनको अनुभूति कस्तो रह्यो त ? प्रस्तुत छ, पाका राजनीतिज्ञ शाहीसँग गरिएको कुराकानी :
प्रदेशसभामा सभामुखको भूमिका पाउँछु भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
निर्वाचन आयोगमा पार्टीहरूले समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई प्रदेशसभामा सिफारिस गरिसकेपछि ६ नम्बर प्रदेशमा आफू नै पाको सदस्य हुँ भन्ने थाहा पाइसकेको थिएँ । संविधानले पनि प्रदेश प्रमुखले ज्येष्ठ सदस्यलाई र, ज्येष्ठ सदस्यले अन्य बाँकीलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था गरेको थाहा नै थियो । शपथ खुवाउने, बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने त्यतिबेलै लागिसकेको थियो । समानुपातिक सिफारिस हुनुअघि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्छु भन्ने सोचेको थिइनँ ।
बैठक सञ्चालनको अनुभव कस्तो रह्यो ?
जिल्ला विकास सभापति भएर परिषद् सञ्चालन गरेको अनुभव पनि सँगालेको थिएँ । यस पटक प्रदेशसभाको पहिलो बैठक कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको ठानेको छु । अरू माननीय साथीहरूले पनि बैठकपछि ‘ल बधाई छ सभामुखज्यू’ भन्दै हात मिलाउनुभो । यसले राम्ररी बैठक सञ्चालन गरेको रहेछु भन्ने महसुस गर्न सजिलो भयो । संसद् सचिवालयका कर्मचारी, राजनीतिक दल सबैको सहयोग पाएँ । पहिलो ऐतिहासिक प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न पाउँदा निकै हर्षित भएँ । सबैतिरबाट वाहवाही बटुल्ने मौका पाएँ । खुसी लागेको छ ।
माघ २९ गते सभामुख चुनिएसंगै तपाईंले निर्वाहको भूमिका बदलिन्छ । त्यसपछि प्रदेशसभामा तपाईंंको सक्रियता के हुन्छ ?
माघ २९ गते प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक बोलाएको छु । त्यसै दिन सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यो बैठक नै मैंले सञ्चालन गर्ने अन्तिम हुनेछ । सभामुखले चुनिएपछि उनैले सञ्चालन गर्छन् । उमेरले बूढो भए पनि म निराश हुने, अल्छी गर्ने स्वभाव छैन । ४२ वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छु । संसदीय चुनाव दुई पटक हार्दासमेत निराश भइनँ । प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा सक्रियताका साथ सदस्यका हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छु । प्रदेशका कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या समाधान गर्न एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले अहोरात्र खट्नेछु ।
प्रदेशसभाको सभामुखलाई तपाईंं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
ठूलो भूगोल भएको सानो प्रदेशसभा हो । अन्य प्रदेशभन्दा यहाँ कम दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दै छ । एमाले(माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदै छन् । ४० सदस्यीय संसद्मा कांग्रेसको जम्मा ६ सिट छ । यस्तो अवस्थामा ६ नम्बरजस्तो विकट, गरिब प्रदेशको विकास गर्न सबै दलबीच साझा एजेन्डा बनाउन जरुरी छ । पक्षप्रतिपक्ष नभनेरै प्रदेशको समृद्धि यात्रामा होमिनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ । सभामुखले तटस्थ भएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाएर कानुन निर्माणदेखि प्रदेशसभाले सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा अगुवाइ गर्नुपर्छ । सभामुख तटस्थ भएन भने प्रदेशसभाले आफ्नो ‘स्प्रिड’ अगाडि बढ्न सक्दैन ।
प्रस्तुति : प्रकाश अधिकारी
प्रकाशित : माघ २४, २०७४ ११:४३